U-Cell C usuzonikeza amakhasimende imali | isiZulu
U-Cell C usuzonikeza amakhasimende imali
UTelkom uzodiliza izinkulungwane zezisebenzi
U-MTN uzodiliza abasebenzi - Inyunyana
Cape Town - Inkampani yezokuxhumana engeyesithathu ngobukhulu kuleli, u-Cell C, usuqale umkhankaso wokuheha amakhasimende nalapho uzonikezela ngemali engafinyelela ku-R10 000 kumakhasimende awo.
Le nkampani imemezele lezi zindaba ngoLwesithathu nalapho iveze ukuthi lokhu kuzoba yingxenye yemihlomulo ezotholakala kolunye uhlobo lwezinkontileka zale nkampani nolaziwa nge-‘Pinnacle’.
U-Cell C usuzoba nezinhlobo ezintathu zezinkontileka ngaphansi kwelesi sigaba sama-Pinnacle, nokuzoba yi-Pinnacle 600, i-Pinnacle 1000 kanye ne-Pinnacle Unlimited.
OLUNYE UDABA: UCell C uzoyilwa enkantolo eyesikhangiso esigxekayo
Isibonelo, amakhasimende e-Pinnacle Unlimited asezokwazi ukushaya izingcingo udede ngaphandle komkhawulo, athumele ama-SMS ngaphandle kokukalelwa bese ethola no-3GB wama-data ohambisana no-7GB wama-data ngaphezulu oyi-promotion kuze kube kuphela inkontileka.
“Bazophinde bathole namaminithi angu-1000 amahhala okufona nge-Wi-Fi kanye nokubuyiselwa yiimali enkulu engu-R10 000,” kusho u-Cell C wengeza ngokuthi namakhasimende e-Pinnacle 250, akhokha u-R250 ngenyanga, nawo azothola imali engu-R3000.
kuzokhumbuleka ukuthi u-Cell C awuqali ukudiza ngemali kumakhasimande njengoba ngonyaka ka-2015, wenza esifanayo ngokukhokhela izikweleti ezisalelwe amakhasimende awo kwezinye izinkampani ukuze ezothatha (amakhasimende) izinkontileka nawo.